PET Preform (PET ဘူးပုံစံငယ် ) ထုတ်လုပ်မှု စက်ပစ္စည်း
အထက်ပါ PET Preform (PET ဘူးပုံစံငယ်) ထုတ်လုပ်နိုင်မည့် စက်ပစ္စည်းများသည် သောက်ရေသန်.ဘူးမျိုးစုံ ထုတ်လုပ်ရာ၌ ၄င်း၊ ဆိုဒါရော အချိုရည်ဘူးမျိုးစုံထုတ်လုပ်ရာတွင် ၄င်း ၊ အချိုရည်ဘူးခွံမျိုးစုံထုတ်လုပ်ရာတွင်၎င်း ၊စားသုံးဆီဘူးခွံမျိုးစုံ ၊ အလှကုန်ပစ္စည်းဘူးခွံ မျိုးစုံ အစရှိသည့်တို.ထုတ်လုပ်ရာတွင် အသုံးဝင်ပါသည်။
၄င်းစက်ပစ္စည်းများသည် အောက်ဖော်ပြပါ PET Preform မျိုးစုံထုတ်လုပ်ရာတွင် အသုံးဝင်ပါသည်။ ရေသန်.ဘူး ၊ ရေနွေးဘူး ၊ စားသုံးဆီပုလင်း ၊ အ၀ကျယ်ပုလင်း ၊ (၅)ဂါလံဆန်. ပုလင်းများ အတွက် PET Preform များထုတ်လုပ်ရန်အတွက် အထူးသင့်လျှော်ပါသည်။
ကျွန်တော်များ၏ တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်း ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်မည့် နည်းစဉ်တွင် မိုတိုင်းစ ထိန်းသိမ်းခြင်းနည်းစနစ် ၊ အခြောက်ခံမှုနည်းစနစ် ၊ ဖြည့်သွင်းခြင်း နှင့် အပူထိန်းသည့် နည်းစနစ်များပါဝင်ပါသည်။
ပလပ်စတစ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ရာတွင်နည်းပညာမြင့်စက်မှုပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ကုန်ကျ စရိတ် သက်သာစေနိုင်မည့် အချက်ကို ထည့်သွင်းတွက်ချက်ထားပါသည်။
အထူးဝန်ဆောင်မှုပေးမည့် ပလပ်စတစ် ပုံသွင်းနည်းစဉ် (Special Injection Unit) ကိုလည်း သုံးစွဲသူများ၏ လုပ်ငန်းခွင်တွင် အကျိုးထူးများ ခံစားမှုရရှိရန် ဒီဇိုင်း ပြုထုတ်လုပ်ထားပါသည်။
Preform မှပလပ်စတစ်ပုလင်းများထုတ်လုပ်နေစဉ် အပူချိန်ကို သဟဇာတ ဖြစ်စေရန် ထိန်း သိမ်းထားသည့် စနစ်ပါရှိပြီး လိုအပ်အပူချိန်ထက် (+) သို.မဟုတ် (-) ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် အတွင်းတွင်သာရှိစေမည့် အပူချိန်ထိန်းချုပ် ကိရိယာသည်လည်းပဲ သုံးစွဲသူတို.အကျိုးရှိစေ မည်ဖြစ်ပြီးအပူလွန်ခြင်း ၊ အအေးလွန်ကဲခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း လေလွင့်မှု လျှော့ချနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
PET Preform ၏ အချက်အလက်များ
PET bottles များအတွက် ၂၀၀မီလီလီတာ မှ ၅ ဂါလံအထ
အများဆုံးအတွဲလိုက်ထုတ်နိုင်မည့် ဦးရေ - ၉၆ခု
တွက်ချက်မှုအရ ၄၈ ခေါင်း(48 Cavaties ) အတွဲပါစက်ဖြင့် ၁၆ ဂရမ် Preform ပုံစံခွက် (Mold ) ဖြင့်ရိုက်ထုတ်ပါက တစ်နာရီလျှင် အနည်းဆုံးပုလင်း ၁၂၀၀၀ ထုတ်လုပ်နိုင်ပါသည်။
Great stretch ratio design for preforms which has high degree of freedom for bottle blow molding.
FKT အုပ်စုမှ FCS ကုမ္ပဏီသည် အလျှင်မြန်ဆုံးပုလင်းဖုံးရိုက်ထုတ် စက်ကို အောင်မြင်စွာ ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီး ၊ပုလင်းဖုံးအရွယ်အစား ၂၈မီလီ / ၃၀ မီလီ အရွယ် ၄၈ခေါင်းပါ စက်မှ တစ်နာရီလျှင် အနည်းဆုံး ပုလင်းဖုံး ၂၆၀၀၀ အထိ ရိုက်ထုတ်နိုင်ပါသည်။
NO 151, TOWER A, ROOM NO., (1003), 10TH FLOOR, MYAWADDY LUXURY COMPLEX, CORNER OF WARDAN ROAD AND BOGYOKE AUNG SAN ROAD, LANMADAW TOWNSHIP, YANGON, MYANMAR.
ADDRESS: Room No. 902, Park Tower (Pan Chan Tower), Myaynigone, Sanchaung Township, Yangon
EMAIL: sunny0049@gmail.com, forasia@fcs.com.tw, service@keen-pro.com
Design by WebTech ဝက်ဘ်စာမျက်နှာ ဒီဇိုင်းပုံစံ